Mozika : Ao Madrida, Fampisehoana Miavaka Notanterahan’Ilay Tarika Mpiangaly Mozika Rodobe Ivondronanà Adolatsento Peroviana Maro · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Gabriela García Calderón Orbe Nandika (en) i Gabriela García Calderón, Gwenaëlle Lefeuvre, nirinandrea
Voadika ny 22 Desambra 2017 6:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, عربي, Español
Ireo mpikambana ao amin'ny Symphony for Peru tao Madrida. Sary nahazoana alalàna.
Ny Symphony for Peru dia fikambanana iray natsangan’ ilay Tenoro Peroviana Malaza Juan Diego Flórez mba ho fanovàna amin'ny alalan'ny mozika ny fiainan'ireo tanora Peroviana avy amin'ny fianakaviana sahirana.
Araka ny voalaza ao amin'ny Tranonkalany Aterineto, asehon'ny angondrakitra voaray tamin'ilay fanadihadiana natao tamin'ireo ankizy nandray anjara tamin'ilay fandaharanasa fa nisy fivoarana azo tsapain-tanana tokoa tamin'ny sehatra maro tamin'ny fiainan'izy ireo :
20% TIA FAMORONANA
30% MATOKY TENA KOKOA
29% TSY NAHERY SETRA LOATRA INTSONY
Hatreto, ankizy manodidina ny 7.000 eraky ny ivontoeram-panofanana 20 manerana ny firenena no efa nahazo fiofanana tao amin'ny Symphony for Peru. Ny taona 2014, ilay Bango Tokana ijerena ny Fahombiazan'ny Fampandrosoana dia nanambara fa :
Nanangana ivon-toerana efatra samy hafa taminà faritra efatra samy hafa tao Però ilay tetikasa : Ireo toerana iva sy lavitra andriana tao Trujillo (amorontsiraka), tao Huancayo (an-tendrombohitra), tao Huánuco (anaty ala trôpikaly) ary ny tao Manchay-Lima (tany efitra). Samy mitondra mozika ho an'[…] ireo ankizy sy tanora miaina anatin'ny, na ambanin'ny fahantrana ny Ivon-toerana tsirairay.[…] Manampy ireo ankizy ilay fandaharanasa mba hahafahan'izy ireo manorina fahatokisan-tena, hanana fahasahiana hametraka tanjona amin'ny fiainana ka hanao izay hahatràrana izany, hampiakatra ny zavabita any an-tsekoly, hanamafy ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana mba hahamora ny fampidirana saina miabo eo anivon'ny fiarahamonina misy azy ireo.
Tao amin'ny tranonkalan'ilay vondrona, nisy tamin'ireo ankizy nandray anjara tamin'ilay orkestra no nanazava ny lanjan'ilay fandaharanasa ho azy ireo :
Ho ahy, zavatra iray tokony ho tsapanao ny mozika rehefa iny ianao mitendry azy iny, anaty fo mibitaka [kanefa koa miaraka amin'ny ] fitsipi-pitondrantena. Rehefa mitendry lokanga aho, dia mahatsiaro tena faly kokoa, mientanentana kokoa. Faly manana eny an-tanako zavamaneno iray mahatonga ahy ho tena faly.
Ny 29 Oktobra 2017, tarika iray avy amin'ny Symphony for Peru sy ilay Filoha mpanangana azy Juan Diego Flórez no nanainga ho any Espaina handray anjara amin'ilay Fankalazàna ny tsingerintaona faha dimy ambiny folon'ny Volunteers Telefónica tao amin'ny Teatra “Royal” tao Madrida.
Ampahany amin'ireo mpikambana ao amin'ny tarika, teo amin'ny Seranam-piaramanidina tao Lima, talohan'ny niaingan'izy ireo ho any Espana. Sary nahazoana alalàna.
Tao amin'ny Pejiny Facebook, nizara tafa fohy niarahana tamin'i Flórez ilay Tarika, lahatsary misy ny famerenana fanaon'izy ireo sy ny findràmana ilay hira malaza Mambo No. 5.
Symphony for Peru tao amin'ny Teatra “Royal”.
Isika rehetra dia Symphony for Peru avokoa 🎶 Nahafinaritra be ilay fampisehoana omaly, Alahady 29 tao amin'ny Teatra “Royal” niarahana tamin'ny tarika symphony for Peru sy ny Sekoly Fampianarana Mozika an'ny Mpanjakavavy Sofia, ho fankalazàna ny faha-15 taonan'ny Volunteers Telefónica ✨🇵🇪👏 Misaotra, Telefónica sy ny Fikambanana Telefónica nanome hetsika tsy ho hadinoina tahaka izany ! #JeChanteJeJoueJeGrandis(MihiraahoMitendrysyMihalehibe)
Navoaka ho an'ny Symphony for Peru ny 30 Oktobra 2017.
Ho fanararaotana ny fandalovan'izy ireo tao amin'ny renivohitr'i Espana dia niara-nitendry tamin'ireo mpikambana avy ao amin'ilay Sekoly Fampianarana Mozika an'ny Mpanjaka vavy Sofia ny tarika Symphony for Peru. Fotoana iray nahafahan'ireo Orkestra roa ireo nifampizara sy nifanakalo traikefa tamin'ny alalan'ny mozika.
Famerenana talohan'ilay seho tao amin'ny Teatra “royal”. Sary nahazoana alalana.
Tao amin'ny Twitter, nizara lahatsary sy sary maro ahitàna ilay fitetezana an'i Espaina nataon'izy ireo ihany koa ilay Tarika, ary koa ireo hetsika izay nandraisan'izy ireo anjara :
Gran concierto en el @Teatro_Real con @jdiego_florez , Sinfonía, la @EscuelaSMRSofia por el 15 Aniv. de @VolunTelefonica @fundacionTef 🎼👏❤️ pic.twitter.com/wjP0nMIETg
Fampisehoana nahafinaritra be tao amin'ny Teatra “royal” niarahana tamin'i Juan Diego Flórez sy ny Sekoly Fampianarana Mozika an'ny Mpanjakavavy Sofia, ho fankalazàna ny faha 15 taonan'ny Volunteers Telefónica
Tena reharehantsika tokoa ny zanantsika ! 👏❤️
Fampisehoana notanterahin'ny Symphony for Peru tao amin'ny Teatra”royal”, Madrida.
Miaraka amin'ireo hetsika isan-karazany ireo, nandray làlana iray izay hahafahan'izy ireo “hihira, hitendry, hihalehibe !”marina tokoa ireo tanora mpitendry ireo.